कसरी शान्त पार्ने रिस? जान्नुहोस् सरल उपाय - Everest Dainik - News from Nepal
कसरी शान्त पार्ने रिस? जान्नुहोस् सरल उपाय
काठमाडौं । रिस एउटा सामान्य भावना हो। यद्यपी रिसकै कारणले कहिलेकाहीँ विभिन्न समस्या निम्तिन सक्छन्। झैझगडा, द्वन्द्व, कलह, आक्रमण, हत्या जस्ता गम्भीर समस्या पनि रिसकै कारणले हुन्छन्।
रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि मानिस जे पनि गर्न उद्यत हुन्छ। र, पछि गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस शान्त गर्न १० देखि उल्टो संख्यामा गन्नुहोस्। यदि धेरै रिस उठेको छ भने १०० बाट उल्टो गन्न सकिन्छ।
यसले धड्कनको गतिलाई ढिलो गर्छ, जसबाट स्वत रिस नियन्त्रण हुन्छ। लामो र गहिरो सास लिनुहोस्। जति छिटो सास फेर्यो त्यति मात्रामा रिस वढ्ने भएकाले यसो गर्दा शान्त बन्न सहज हुन्छ। यताउता हिँड्नुहोस्। एक्सरसाईजनले मांसपेशीमा चाल उत्पन्न हुन्छ। जसले गर्दा विस्तारै रिस कम हुँदै जान्छ।
गर्दन तथा घाँटीको एक्सरसाइज गर्नुहोस्। जसले योगको काम गर्छ। जुन भावनालाई नियन्त्रण गर्ने सजिलो उपाय हो। शान्त ठाउँमा गएर बस्नुहोस्। आँखा बन्द गरेर मनपर्ने दृश्यहरु कल्पना गर्नुहोस्। सुरुमै भावना नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि एकछिन आराम गरेर कल्पना गर्न सकिन्छ। यसले पनि रिस नियन्त्रण गर्छ। रिस कम गर्न संगित सुन्न सकिन्छ। कतै शान्त ठाउँमा घुम्दा पनि रिस नियन्त्रण हुन्छ। यो जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।